Nchịkọta Google: Metrics Report Mkpa maka Ọdịnaya Ahịa | Martech Zone
Usoro ahụ ahịa ahịa bụ kama ịba ụba ụbọchị ndị a. Imirikiti ndị isi ụlọ ọrụ na ndị na-ere ahịa maara na ha kwesịrị ịdị na-azụ ahịa ọdịnaya, ọtụtụ abanyelarị ịmepụta na imejuputa usoro.
Ihe iseokwu chere ọtụtụ ndị ahịa azụmaahịa bụ:
Kedu ka anyị si eso ma tụọ ahịa ọdịnaya?
Anyị niile maara na ịgwa ndị otu C-Suite na anyị kwesịrị ịmalite ma ọ bụ na-aga n’ihu ịzụ ahịa ọdịnaya n’ihi na onye ọ bụla ọzọ na-eme ya agaghị egbutu ya. E nwere ọtụtụ ọnụọgụ dị mkpa na-enye nghọta maka mbọ azụmaahịa ọdịnaya, ihe na-arụ ọrụ, ihe anaghị arụ ọrụ, yana ebe enwere oghere.
N'agbanyeghi ma usoro dijitalụ gị gụnyere atụmatụ ịzụ ahịa ọdịnaya doro anya, ị ghaghị ịchụso arụmọrụ weebụsaịtị gị. Mkpokọta bụ isi nke usoro ahịa ọdịnaya ọ bụla, ma usoro a na-amalite ma ọ bụ tozuru oke.
Nchịkọta Google bụ ngwa nyocha dị mfe iji melite ma nye ọtụtụ ọrụ na ozi. Ọ bụ n'efu, dị mfe melite Google Analytics, ma na-enyere ndị ahịa ahịa aka ịmata ọdịnaya na ịtụle ka ọdịnaya ha na-eme.
Mgbe ị na-enyocha usoro ịzụ ahịa ọdịnaya (ma ọ bụ na-akwadebe ịmepụta atụmatụ), ọ dị mma ịmalite site na isi ihe - general traffic to website pages. Akụkọ a dị n'okpuru Àgwà> Ọdịnaya Saịtị> Peeji niile.
Isi ihe dị ebe a bụ nnukwu ọnụọgụ nke nleta na ibe dị elu. The homepage bụ mgbe ndị kasị gara, ma ọ bụ na-akpali ịhụ ihe na-akawanye ọtụtụ okporo ụzọ karịrị nke ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere usoro ịde blọgụ tozuru etozu (5 + afọ), blọọgụ nwere ike ịbụ peeji ndị ọzọ a na-agakarị. Nke a bụ nnukwu ntụpọ iji hụ etu ọdịnaya si arụ ọrụ n'otu oge (izu, ọnwa ma ọ bụ ọbụna afọ).
Oge na Peeji
Ogologo oge nke ndị ọbịa na-etinye na ibe na-enye nghọta na peeji ahụ na-ekere òkè.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na peeji ndị kachasị aga na-abụkarị peeji ndị kacha adọrọ mmasị. Họchaa site na Avg. Oge na Peeji iji hụ peeji ndị nwere oge kachasị elu na ibe. Peeji ndị nwere obere ngosi peeji nke (2, 3, 4) nwere ike ilele anya dị ka ihe na-adịghị mma. Otú ọ dị, ndị na-adọrọ mmasị bụ peeji ndị nwere ihe karịrị 20+ echiche.
Ka ị na-ekpebi isiokwu ndị ị ga-etinye na kalenda ederede azụmaahịa gị, ọ dị mkpa ileba anya na peeji ndị ga-enweta ọtụtụ okporo ụzọ (ndị a ma ama) yana peeji ndị nwere oge dị elu na ibe (na-etinye). Dị ka o kwesịrị, kalenda akwụkwọ akụkọ gị kwesịrị ịbụ nchikota ha abụọ.
Mgbe anyị nwere ike ịbanye n'ime tracking ma nyochaa mbọ ịzụ ahịa, ọ dị mkpa icheta na atụmatụ nke usoro azụmaahịa bụ ịchụpụ ma gbanwee ndị ahịa ọhụụ. Enwere ike ichota mgbanwe site na iji Ebumnuche na nchịkọta Google n'okpuru Nlekọta> Lelee.
Nchịkọta Google na-enye ohere naanị ka eburu ebumnuche 20 n'otu oge, yabụ jiri ya mee ihe n'ụzọ amamihe. Omume kachasị mma bụ soro ntinye akwụkwọ ntanetị, ntinye akwụkwọ akụkọ, nbudata akwụkwọ ọcha, yana ihe ọ bụla ọzọ na-egosi ntụgharị onye ọbịa na webụsaịtị.
Enwere ike ilele ihe mgbaru ọsọ anya n'okpuru Mkparịta ụka> Mgbaru Ọsọ> Isi na nchịkọta Google. Nke a na-enye nkọwa zuru ezu banyere otu ibe ọdịnaya gị na ibe gị na-eme maka ịkwọ ụgbọala.
Isi mmalite okporo ụzọ na Ọkara
Isi mmalite okporo ụzọ na Ọkara bụ nnukwu ihe eji eme ihe maka ịkọwa etu okporo ụzọ si abanye na weebụsaịtị na ibe ya. Nọmba ndị a dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ nkwalite ụgwọ na isi mmalite ndị dị ka Google Mgbasa ozi, LinkedIn, Facebook, Akaụntụ-Dabere Marketing netwọk, ma ọ bụ ndị ọzọ na netwọk mgbasa. Ọtụtụ n'ime ọwa nkwado ndị a na-akwụ ụgwọ na-enye dashboard nke metrics (ma na-enye pikselụ nsuso), mana isi mmalite kachasị mma bụkarị Google Analytics.
Mụta ebe ntụgharị gị na-abịa maka ebumnuche ọ bụla site na ilele Mgbanwe> Mgbaru Ọsọ> Mgbaru Ọsọ akụkọ. Nwere ike ịhọrọ Ebumnuche ịchọrọ ilele na Isi mmalite / ọkara maka imezu ebumnuche ahụ (ntụgharị). Nke a ga - agwa gị ole n'ime ndu ndị ahụ sitere na Google Organic, Direct, CPC, LinkedIn, Bing CPC, wdg.
Ileba anya na etu isi mmalite dị iche iche na-emetụta mkpokọta ahịa ọdịnaya gị n'okpuru Nnata> Okporo ụzọ niile> Isi mmalite / Ọkara.
Nkwupụta a na-enyere onye na-ere ahịa aka ịhụ ihe Isi mmalite na Mediums na-akacha ọtụtụ mgbanwe mgbanwe mgbaru ọsọ. Tụkwasị na nke a, enwere ike ịmegharị akụkọ ahụ iji gosi ebe ntụgharị na-abịa maka ebumnuche ọ bụla (dịka akụkọ Mgbaru Ọsọ Goal). Jide n'aka na ịlele ibe / nnọkọ, Avg. Oge Oge, na Ọnụego ibiaghachi maka ibe ndị a.
Ọ bụrụ na Isi mmalite / Ọkara nwere ọnụego ntọghata dị ala, ibe dị ala / nnọkọ, ogbenye Avg. Oge Oge na ọnụego dị elu, ọ bụ oge iji nyochaa ma Isi mmalite / Ọkara ahụ bụ itinye ego nke oge na akụrụngwa.
Na mpụga nke Google Analytics, enwere ọtụtụ ngwaọrụ akwụ ụgwọ na soro SEO na isiokwu rankings. Ọnọdụ isiokwu na-enye aka maka ịchọpụta ụdị ọdịnaya ọdịnaya ịmepụta na ihe ndị ahịa nwere ike ịchọ mgbe ịntanetị. Jide n'aka na-iwekota gị Akaụntụ Google Search Console na nchịkọta Google. Webmasters nwere ike inye ụfọdụ nkọwa banyere isiokwu ndị na-ebugharị okporo ụzọ na saịtị gị.
Ngwá ọrụ SEO dị elu gụnyere Semrush, ggbanwe, Ahrefs, BrightEdge, Onye nduzi, na Moz. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịwelite ọkwa maka ụfọdụ mkpụrụokwu (ma nwetakwu okporo ụzọ maka okwu ndị ahụ), rụọ ọrụ ma kwalite ọdịnaya gburugburu okwu ndị ahụ.
Kedu akụkọ na metrik ị na-eji iji nyochaa ma gwa gị usoro ahịa ọdịnaya gị?